Xisaabaadyada Kuwa Raacya Ay Ka Badan Yihiin Instagram ▷ ➡️ Followers ▷ ➡️
Xisaabaadka ay lasocoto taageerayaal badan oo kujira instagram
July 15, 2019 0 comments 1007
Ku dhawaad ​​sannado cusub ka hor tan iyo markii Kevin Systrom iyo Mike Krieger ay keensadeen codsigooda sawir qaan. Maanta waa mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee ugu jecel dhammaan shabakadaha. Ka sokow ahaanshaha sidoo kale dalabka ugu isticmaalka badan adduunka. Tan iyo markii la aasaasay shaashadda waxay muujisay astaamo ah inay wax weyn yihiin. Astaamaha u gaarka ah, tafatirka sawirrada, is dhexgalka iyo raacitaanka ayaa u yeedhay dareenka qof walba. Noocan oo kale ah wuxuu ahaa boqortooyadii Facebook, oo ka dhigtay iibsigiisa 2012. Waqtigaas appku wuxuu lahaa 27 milyan oo isticmaale. Kadib iibsashada instagram lambarkan wuxuu kordhay 100 milyan.
Maaha wax qarsoodi ah in instagram-ka uu yahay dalabka ugu caansan adduunka. Taasina sidoo kale waa tan ugu xiisaha badan dadka oo dhan. Kuwa badan ayaa gaadhay sumcad mahad leh qalabkan. Marka xigta waxaan ku tusi doonaa kuwa cwaxaad ku leedahay saaxibo badan barta instagram
Waa maxay xisaabta instagram-ka ee ugu raacsan?
Instagram wuxuu la shaqeeyaa qaabka raacsan. Si ka duwan Facebook-ga la shaqeeya "asxaabta" tanina waxay keenaysaa in la is raaco. Instagram, dhanka kale, waxay siisaa isticmaaleyaasheeda ikhtiyaar inay raacaan, oo ka kooban raacida isticmaale kale adigoon ku raacin. Tani waxay siisay barxad weyn oo loogu talagalay taageerayaasha shaqsiyaadka caanka ah, kuwaas oo indha indheyn kara nolosha ama ugu yaraan waxa dadka caanka ah muujiyaan. Tiro aad u tiro badan oo ka mid ah xiddigaha Hollywood iyo heesaayaal ayaa iska leh qaar Waxaad heysataa barnaamijyo badan oo instagram ah. In kasta oo midkoodna uusan lahayn cinwaanka xisaabta marar badan.
Astaanta guud ee liiska xisaabaadka lasocda badan oo kujira instagram Ma ahan wax intaas ka sii yar oo aan ka yarayn koontada rasmiga ah ee masraxa. Taasi waxay ku dhowdahay labanlaab tirada tirada asxaabta akoonku ku leeyahay booska labaad. Inta ugu badan dadka isticmaala instagram-ka waxay raacaan astaanta guud. Taasi ma waxay sidoo kale tahay mid ka mid ah talooyinka xisaabta ee ugu horreysa ee instagram ku siinaya inaad raacdo.
Liiska dadka inta badan raacday
Waxaa jira liis gareyn balaaran oo xisaabaad ah iyo dadka u taagan sida instagram-ka ugu raacsan. Waxa kale oo jira shakhsiyaad badan oo caan ah oo maanta caan ku noqday mahadnaqa instagram. Laakiin, xulashada masraxa ayaa ah xiddigo waaweyn, jilaayaal iyo fannaaniin. Maadaama taageerayaashan kuwaan ay ula falgalaan hab gaar ah noloshooda. Marka xigta waxaan ku tusi doonaa waxa ay yihiin xisaabaadka lasocda badan oo kujira instagram:
Sannadkan 2019, Neymar wuxuu galay kaalinta tobnaad mid ka mid ah akoonnada ugu taageerayaasha badan barta instagram. Kubad sameeyaha ayaa leh 114 milyan oo taageerayaal ah, isagoo ka qaadaya booskii uu heesaaga Justin Bieber ku lahaa dhammaadka 2018.
Fannaanka Mareykan ah Taylor Swift this 2019 ayaa kaalinta sagaalaad ka dhex jira dadka ugu raacsan instagram. Waxay leedahay qiyaastii 115 milyan oo raacsan, inkasta oo ay ku yaalliin meel ka yar tii sanadkii hore.
Fannaanka caanka ah ee adduunka, Beyoncé, ayaa ka mid ah kuwa caanka ah ee caan ka ah Instagram-ka. Dhamaadka sanad walba waxaa la geliyaa liisaska dadka inta badan la raaco shabakadaha bulshada. 2019 kama duwana. Beyoncé waxay ku leedahay koonto rasmi ah qaar ka mid ah daabacadaha 1785 waxayna horay u gaadhay malaayiin 129 ah oo raacsan.
Xiddiga telefishanka iyo moodalka, Kylie Jenner, sidoo kale waa caadi in lagu arko iyada oo ka mid ah dadka aadka loo raaco. Hadda wuxuu ku leeyahay malaayiin 140 ah oo raacsan akoonkiisa rasmiga ah.
Shakhsiyadda telefishanka iyo walaasha Kylie Jenner, Kim Kardashian, waa mid ka mid ah xiddigaha ugu muranka badan maanta. Oo waxay u taagan tahay joogitaankeeda shaashadda, halkaas oo ay ku ururtay qaar ka mid ah daabacadaha 4901. Marka lagu daro 143 milyan oo raacsan.
Dwayne Johnson, oo loo yaqaan "dhagaxa" ama "dhagaxa" ee Isbaanishka, waa jilaa iyo halgan hore. Miyuu mid kale oo ka mid ah xisaabaadka lasocda badan oo kujira instagram. Xogtiisa ayaa leh daabacadaha 4369 iyo 149 milyan oo raacsan.
2018-heesta iyo jilaa, Selena Gomez, waxay gashay kaalinta koowaad iyada oo caan ah oo ay raacsan yihiin taageerayaal badan. Sannadkan waa la dhaafay, in kasta oo ay wali ku sii jirto liiska xisaabaadka leh taageerayaal badan oo instagram ah. Sannadkan wuxuu leeyahay malaayiin 153 raacsan.
Fannaanka Mareykanka ah, Ariana Grande, ayaa fuuley jagooyin ilaa uu ka galay booska saddexaad ee xisaabaadyo raacsan oo dheellitiran instagram. Hadda wuxuu haystaa malaayiin 159 ah oo raacsan.
Sannadkan xiddiga kubada cagta ee Cristiano Ronaldo ayaa gaadhay meeshii ugu horreysay isagoo caan ah inta badan shaashadaha instagram. Iyo kaalinta labaad ee xisaabaadka lasocda badan oo kujira instagram. Ka sarreeyaa kaliya ciyaartoyda kale, laakiin xiddigaha kale ee ku dhex jira instagram. Xilligaan kubbada cagta wuxuu leeyahay 178 milyan oo taageerayaal ah.
Waxaan horey u soo sheegnay in koontada ay la socdaan dad badan oo instagram ku jira ay tahay koonto rasmi ah. Xilligan koontada ayaa ka sarreysay malaayiin 300 raacsan oo weli sii kordhaya.
Sida loo helo kuwa raacsan
Waxaa jira dad badan oo ku arkay instagram fursad ay ku horumarinayaan naftooda isla markaana caan ku noqon karaan. Tiro aad u tiro badan oo dadkan ka mid ah ayaa gaadhay ujeeddooyinkooda. Xilligan casriga ah ee internetka waxaa la soo saaray nooc xirfad cusub ah. Kuwani waa saameynta, kuwaas oo nolol u abuuraya waxyaabo xiiso u leh koox fara badan oo raacsan. Kani waa saameynta shabakadaha bulshada ee maanta, oo aad ka heli karto dhalinyaro dhallinyarro ah oo riyadoodu tahay inay noqdaan kuwa saameyn ku leh.
Maanta tirada dadka raacsan ayaa muujinaya aqbalaadda iyo guusha. Marka rabitaanka dad badani waa inay lahaadaan tiro aad u tiro badan ama tiro badan oo raaciyayaal ah oo ku jira boggagooda shabakadaha bulshada. Kobaca Instagram wuxuu qaataa dareenka isticmaaleyaal badan. Waxay rabaan inay lahaadaan dad badan oo raacsan.
Si aad guul uga gaarto shaashada dhexdeeda ma jiro weli qaacidad loo dammaanad qaaday In kasta oo, haddii ay suurtagal tahay in lagu guuleysto iyada la adeegsanayo farsamooyinka qaarkood, in guusha yar aad ku noqon karto xidigga xiga ee masraxa. Waa kuwan tabaha qaar si loo kordhiyo tirada dadka raacsan:
Quruxda wanaagsan ku hay quudintaada.
Ku dhaji waxyaabo tayo leh.
Noqo mid la jaan qaada qoraaladaada.
Ka fikir dhageystayaasha aad rabto inaad gaarto.
Abuur waxyaabo xiiso leh.
Ma iibsataa kuwa raacsan?
Qaar badan oo ka mid ah adeegsadayaasha kujira instagram-ka waxay rabaan inay awoodi karaan inay helaan ama helaan dad badan oo raacsan. Tan iyo, sidii aan horeyba u soo sheegnay, lahaanshaha dad badan oo faallooyin ah, faallooyin ama waxyaabaha la jeclaado ayaa noqdey erey loo yaqaan guusha ama aqbalaadda Maanta waxaan ku nool nahay marxaladda shabakadaha bulshada, sida muuqata guulaha ka dhex jira kuwanna waa waxa dad badani rabaan.
Helitaanka waxyaabo badan oo soo socda gudaheeda gudaheeda ma ahan wax sahlan sida muuqata. Marka lagu daro helitaanka olole suuqgeyn oo wanaagsan, waxyaabaha ku jira iyo waxyaabo kale, marar badan qodobka nasiibku sidoo kale wuu soo galayaa. Xaqiijinta ayaa muhiim ah waxaanna rajeyneyaa in maalin un xisaabtaadu ay guulo gaari doonto. Laakiin, runtu waxay tahay in hawshani badanaa ay adag tahay. Dadkuna waxay rabaan inay gaaraan guul deg deg ah. Tani waa kiiska dadka iibsada kuwa raaca.
Arrinta iibsashada kuwa raacsan ayaa ah arin aad looga murmo. Dadku waxay rabaan inay ku guuleystaan ​​instagram sida ugu dhakhsaha badan. Iibsiga kuwa raacsan ayaa bixinaya intaas uun. Laakiin ma aaminbaa in la iibsado kuwa raacsan? Runtu waa maya. Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah oo tan ku saabsan gelitaanka Iibso kuwa raacsan.
Furaha guusha guusha instagram
Hore waxaan u soo sheegnay in geeddi-socod lagu dammaanad qaadayo guusha instagram dhexdeeda aan wali la helin. Hadday jiraan, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaan lahayn. Laakiin, waxa jira ayaa jira tabaha taxane ah oo kuu horseedi kara inaad ku guuleysato dhexdeeda shabakadan bulshada, in kasta oo aysan ahayn wax la hubo. Gaar ahaan maadaama inta badan caannimada shaashada dhexdeeda ay u baahan tahay boqolkiiba nasiib. Halkan waxaa ku yaal talo bixinno fure kuu ah oo adiga kuu ah inaad ku guuleysato instagram:
Waa inaad maskaxda ku heysaa in instagram-ka uu yahay midka ugu isbeddelada badan xilligan. Maxaa guul u horseedi kara maanta berri ma ahaan doono, waa inaad tixgalisaa tan si aad u abuuri karto waxyaabo.
Abuur waxyaabo muuqaal ahaan xiiseeya oo sababi kara saameyn ku dhex jirta isticmaalaha arka.
Inta dareenkaagu ka sii badan yahay, ayaa ka sii fiican. Jiilalka cusub ayaa ah kuwa dareen badan leh, sidaa darteed mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee dareenkooda loo helo ayaa ah in si toos ah dareenkooda loo aado.
Iskuday inaad ahaato sidii asalka ahayd oo suurogal ah In kasta oo nuxurkaagu yahay mid asal ah, waxay si muuqata uga dhex muuqan doontaa tiro badan oo daabacado ah oo maalin kasta lagu sameeyo shaashadda dhexdeeda.
Instagram-ka ayaa loo sameeyay si adeegsadaha loo abuuro xirfadle xisaabta sawir-qaaduhu ku saabsan yahay. Ka faa'iidayso taas.
Abuur waxyaabo tayo leh. Tani waa mid soo noqnoqonaysa, laakiin runtu waxay tahay in alla inta uu nuxurkaagu yahay mid tayo leh, tiradu wax macno ah ma leh. In kasta oo aysan ku dhaawici doonin inaad adigu joogto tahay.
Qeex nooca koontada aad leedahay. Waxaana laga soo qaatay qaybtaan waxyaabaha la xiriira nooca xisaabta aad haysato. In kasta oo waxyaabahaaga la sii saadaalin karo ayaa ka sii fiican. Haddii qofku raaco koontadaada waa sababta oo ah wuxuu jecel yahay waxyaabahaaga. Waxna ha wadaagin.
Weydiiso adeegsadayaasha kale inay la wadaagaan qoraalladaada.
1 Waa maxay xisaabta instagram-ka ee ugu raacsan?
2 Liiska dadka inta badan raacday
2.2 Taylor Swift
2.4 Kylie Jenner
2.5 Kim Kardashian
2.6 Rock The
2.7 Selena Gomez
2.8 Ariana Grande
2.9 Cristiano Ronaldo
3 Sida loo helo kuwa raacsan
4 Ma iibsataa kuwa raacsan?
5 Furaha guusha guusha instagram
Ayaa ku arkaa qoraaladaada sawirka
Khaladaadka Instagram ee caadiga ah iyo sida loo xaliyo